Ungaliqeda kanjani iphunga lomchamo wezinja ingunaphakade | Izinja Umhlaba
Ungasusa kanjani iphunga lomchamo wezinja
Ukuba nenja kusho umthwalo wokuyinakekela nokunakekela lokho okuyenza ingcole noma yephule. Kodwa-ke, enye yezinkinga ezivamile zezinja, zombili imidlwane nezindala, ihlobene nephunga. Ngokuqondile nge susa iphunga lomchamo wezinja phansi.
Noma ngabe usesitaladini, ekhaya, embhedeni, kusofa noma endlini yakho, leli phunga liqinile futhi yebo, futhi alijabulisi. Ngenhlanhla, unemikhiqizo namakhambi asekhaya angayibulala kalula. Ngabe ufuna ukuthi sikuqondise ukuxazulula inkinga?
1 Imikhiqizo emihle kakhulu yokuqeda iphunga lomchamo wezinja
2 Amakhambi asekhaya asebenza ukuqeda iphunga lomchamo wezinja
3 Kungani kungafanele ujezise inja yakho ngokuchamela endlini
4 Ungalisusa kanjani iphunga lomchamo kuye ngendawo
4.2 Kusuka kusofa
4.5 Kusuka embhedeni
Imikhiqizo emihle kakhulu yokuqeda iphunga lomchamo wezinja
I-EOS (1 litre) Eliminator ...
Isikhiphi Sesixazululo Esilula...
I-Petsly Remover Spray ...
Uma ungazukusebenzisa amakhambi asekhaya, noma uthembela kakhulu kwimikhiqizo abayithengisayo ukuqeda iphunga lomchamo wezinja, lapho-ke singancoma nezinye izinketho.
Iningi labo linjalo okwenziwe ngemikhiqizo engahambisani nephunga lomchamo wezinja kuphela, Futhi bangagcina ama-parasites kude noma asebenze njengezibulala-magciwane. Akufanele wesabe ukuthi zizothinta izilwane, ngoba azikho, ziphephe ngokuphelele. Abanye ngeke babe nanoma yiluphi uhlobo lwephunga, okungenani elizwakala kuwe.
Futhi yiziphi esingazincoma?
Izifutho ezinciphisa i-enzyme. Zisebenza kahle kakhulu futhi azisebenzeli umchamo kuphela, kodwa futhi nendle nokuhlanza.
Shabalalisa izilwane ezifuywayo ze-Oxi Action. Isetshenziselwa ukususa amabala ezilwaneni ezifuywayo. Yize kusebenza futhi emchameni.
Isuseli se-enzymatic yezilwane ezifuywayo. Akugcini nje ukukhipha iphunga lomchamo, kepha futhi kuyahlanza futhi kubulale amagciwane.
Isifutho sokususa iphunga i-AniForte Odor Stop. Akulungele ukusula kuphela iminonjana yokuthi uke wachama kuphi, kodwa futhi nanoma iyiphi iphunga elisalelayo elisele.
Susa iphunga lesilwane. Lo mkhiqizo we-EOS ulungele imoto, usofa, i-sandbox, utshani, njll.
Umkhwabanisi we-Menforsan enzymatic. Isusa noma yiliphi iphunga elisele, kokubili umchamo wakamuva nowakudala. Ngaphezu kwalokho, kuvimbela ukushintsha kombala noma ama-grooves ezindwangu naphezulu.
Amakhambi asekhaya asebenza ukuqeda iphunga lomchamo wezinja
Ukuqeda iphunga lomchamo wezinja akuyona into okufanele ubhekane nayo lapho esengumdlwane futhi ifunda ukuthi akufanele izikhulule endlini. Ungayidinga futhi lapho uphuma naye, ngoba kungumthetho ukuthi ubeke omakhelwane ukuze imigwaqo inganuki njengomchamo wezinja; noma lapho esemdala, lapho ompofu esekhulile futhi engakwazi ukuvimbela upee wakhe ukuthi abaleke.
Ngakho-ke, ukuba namakhambi amaningi asekhaya lowo msebenzi kuhlale kungumqondo omuhle. Futhi into ejwayelekile ukuthi, njenge-bleach, i-cleaners, isebenzisa i-air fresheners ... kulungile, kepha konke ekwenzayo ukufihla inkinga, kepha ngemuva kwesikhashana kuyaphinda kuvele.
Ungayilungisa kanjani-ke? Lapha sikushiya okunye amakhambi asebenzayo. Vele, sincoma ukuthi, ngokuya ngendawo, impahla ... ufake okukunye noma okunye. Isibonelo, uma usebenzisa i-hydrogen peroxide endwangu, ungagcina unamabala ngoba umbala udlile kulolo ketshezi.
Iperoxide. Ngenye yezindlela eziphumelela kakhulu (khumbula ukuthi iyakwazi ukususa igazi ezingutsheni). Kubalulekile ukuthi uhlanganise ingxenye eyodwa yamanzi nengxenye eyodwa ye-hydrogen peroxide nokuthi uyivumele isebenze okungenani isigamu sehora. Uma ubona ukuthi ngemuva kwalesi sikhathi nangemva kokuyihlanza isanuka, phinda inqubo kodwa uyiyeke isikhathi eside.
Uviniga Uviniga akuyona nje into yokuhlanza ngokwemvelo, kepha futhi unamandla okubulala amagciwane (khumbula ukuthi uyakwazi ukugcina izimbungulu zombhede, amazenze ... kude nenja noma izindawo lapho kuvame ukuba khona). Ukuyisebenzisa, hlanganisa ingxenye eyodwa yamanzi nengxenye eyodwa yeviniga. Sincoma ukuthi uyigcobe kwisifutho bese uyivumela ukuthi isebenze imizuzu engama-20.
I-bicarbonate yesodium. Isoda yokubhaka inezinzuzo eziningi, ezempilo, zosuku nosuku futhi yebo, futhi nokuqeda iphunga lomchamo wezinja phansi noma enye indawo. Kulokhu, kufanele uyisebenzise ngophawuda, uyilahle ngqo ebusweni (uma usususile umchamo futhi womile, kunjalo). Kufanele uyishiye ubusuku bonke futhi, ekuseni, ibhulashi noma umshini wokuhlanza, uyayisusa.
Ilamuna. Iphunga likalamula linamandla amakhulu uma ulwa nomchamo, futhi lizosebenza njengomuthi wokuxosha ukuze inja yakho ingachami endaweni futhi. Ukuze wenze lokhu, kufanele uhlanganise u-100ml wejusi kalamula no-50ml wamanzi. Ngokuzithandela ungangeza izipuni ezimbili zesoda yokubhaka. Ngesifutho, gcoba ingxube endaweni bese uyishiya imizuzu engama-30.
Kungani kungafanele ujezise inja yakho ngokuchamela endlini
Abanikazi abaningi bezilwane ezifuywayo, lapho inja yabo ichamela endlini, abakwenzayo ukubamba isilwane bese benza isifonyo sithinte umchamo usimemeza ngokuthi ungachami ngaphakathi, noma usishaye.
Kufanele uqonde izinto ezimbili:
Ukuthi inja iyakhohlwa esikwenzile ngemuva kwemizuzu embalwa, ngendlela yokuthi izokuqonda okushoyo, noma kungani uyithukuthelele.
Inja ayiqondi ngokuya ngezijeziso. Udinga imfundo, futhi udinga ukubekezela. Ufana nengane encane. Kungani ungabambi ikhanda lengane yakho uyicindezele phansi ngenkathi uyimemeza futhi uyishaya? Yebo, nenja ayenzi kanjalo. Ngaleyo ndlela ngeke ufunde; empeleni into azoyifunda ukwesaba wena. Ngesaba kakhulu.
Yini ongayenza ngokubuyisela?
Zihlomise ngokubekezela bese uzama ukumfundisa ngendlela engcono kakhulu. Kulokhu, ngokuqiniswa okuhle. Njalo lapho echama noma izidingo zakhe kufanele zinikeze ukwelashwa. Kufanele kube ngeyenyama, futhi uma isikhulile ungaya kumklomelo we-caresses.
Ngaleyo ndlela uzoqonda ukuthi uma wenza kahle, uzothola umklomelo; kepha uma ukwenza ngokungafanele awunayo.
Ungalisusa kanjani iphunga lomchamo kuye ngendawo
Njengoba sazi ukuthi izinja azichami phansi kuphela, kepha futhi zivame ukuba nokuhlelelwa kwezinye izinto, nazi ezinye izixazululo zokususa iphunga lomchamo kuye ngokuthi kade ikuphi.
Izinja, ikakhulukazi ezesilisa, zivame ukuchama ngokuphakamisa izidladla zazo, okungaphezu kwephansi, okungangcolisa udonga. Ingabe ikhona indlela yokulungisa? Ushaye khona. Thola isitsha nesiponji. Sebenzisa amanzi anokuwasha (okubalulekile, awanayo i-ammonia) ukuya geza udonga (ngaphandle kokukhipha upende odongeni).
Bese udlulisa iphepha lokumunca ukususa umswakama owedlulele futhi, lapho ulibona lomile, fafaza uviniga omncane. Akudingeki ukuthi uyicwilise, kungukuvikela nje ukuze iphunga lingaveli.
Usofa ikakhulukazi wenziwe ngendwangu, kepha kukhona nesikhumba. Sincoma ukuthi ufake isicelo, noma el uviniga, noma umkhiqizo okhethekile lokho kufanelekile ngezinto okwenziwa ngazo usofa.
Emgwaqweni sincoma ukuthi uthathe owodwa fafaza ibhodlela eligcwele uviniga namanzi (ngezingxenye ezilinganayo). Uma uqeda ukuchama, fafaza enye yale ngxube bese uyishiya yome yodwa.
Phansi unezinketho eziningi ngokuya ngohlobo lwento eyiyo. Uma iyi-parquet, i-terrazzo, imabula, i-ceramic ... kuzofanela usebenzise ifayili le- isihlanza noma ikhambi lasekhaya lokho ngeke kushiye uphawu kuyo. Ungazama ukubhaka isoda noma uviniga noma i-hydrogen peroxide uma kungenzeki lutho ngoba uyamanzisa.
Njengomthetho ojwayelekile, izinja azivamisile ukuchama kubaninizo noma emibhedeni yazo ngaphandle uma zigula, zingenakuzibamba noma ziguga kakhulu.
Uma kunjalo, ungakhetha ukufaka isicelo amanzi oksijini amashidi noma umkhiqizo othile ukukhipha amagciwane futhi ususe amabala ezindwangu. Endabeni kamatilasi, bheja kujusi kalamula noviniga.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ungasusa kanjani iphunga lomchamo wezinja
Ama-Bib wezinja: ngakho konke ukuthanda
Umshini wokuhambisa amanzi wezinja